Ximena, वित्तीय सेवा प्रबन्धक स्वागत छ
lending8 मा जुलाई 30, 2014 द्वारा लिखित।
उनीले एमएएफ टोलीमा व्यवसाय र समुदायको लागि उनको उत्कटता ल्याउँछिन्!
Ximena Arias मे २०१ 2014 मा वित्तीय सेवा प्रबन्धकको रूपमा MAF मा भर्ना भयो। उद्यमशीलता र उनको बहुसांस्कृतिक पालनपोषणको लागि उनको उत्कटताका साथ, उनी जागिरको लागि उत्तम फिट थिइन्।
कोलम्बियामा जन्मिएकी, Ximena १२ बर्षको उमेरमा अमेरिकामा बसाई सकी। परिवार फ्लोरिडाको मियामीमा बसोबास गरेपछि, Ximena ले मध्य विद्यालयमा समायोजन गर्न संघर्ष गर्यो। भाग्यवस, उनको अंग्रेजी दोस्रो भाषाको साथीको रूपमा उनको लागि एक समर्थन समूह भयो।
"हामी सबै एक अर्कासँग दुई सांस्कृतिक भएको सम्बन्धित छौँ र अरुसँग कसरी सम्बन्धित छ भनेर बुझेका छौं," झिमनाले भनिन्।
कोलम्बियामा फिर्ता, Ximena का आमा बुबा दन्त उत्पादन आपूर्ति व्यापार चलाए। उनका बुबा व्यवसायको पछाडि रणनीति थियो, सञ्चालनहरूको निरीक्षण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जबकि उनकी आमा व्यवसायको अनुहार हुनुहुन्थ्यो, ग्राहकहरू ल्याउने र यस क्षेत्रमा दन्त चिकित्सकहरूसँग सम्बन्ध निर्माण गर्ने काममा। Ximena उनी आफ्नो आमा बुबा को एक संयोजन हो विश्वास गर्छन् र ती दुवै अनुभवबाट अमूल्य सीप छान्नुभयो।
Ximena विविधता द्वारा घेरिएको रुचि र फ्लोरिडा एक "ल्याटिन अमेरिकी आप्रवासीहरु को ठूलो पिल्ग पटा।"
उनी स्पेनिश, पोर्तुगाली, फ्रान्सेली र केहि जर्मन भाषामा पोख्त छिन्। उनी फ्लोरिडा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरी र भाषाविज्ञान र व्यवसाय प्रशासनमा बीए र पछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायमा स्नातकोत्तर गरे। उनी स्नातक पछि, Ximena अंग्रेजी सिकाउँछिन् र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु संग काम।
खाडी क्षेत्रमा आइपुग्दा, Ximena फिर्ता दिन र उनीहरुको चाहनालाई अनुसरण गर्न चाहान्छ कि मानिसहरु लाई राम्रो स्रोत र सूचना छनौट गर्न आवश्यक संसाधनहरु संग जोडेर। उनले एमएएफमा आउनु भन्दा पहिले महिला रोजगारको लागि महिला पहलमा काम गरेकी थिइन। उनले Lending Circles मोडेललाई कदर गर्छिन् किनभने यो आप्रवासीहरूसँग परिचित छ र विश्वभर अभ्यास गरिएको छ। वित्तीय सेवा प्रबन्धकको रूपमा उनको भूमिकामा, Ximena सानो व्यवसाय कोचिंग, microloan कार्यक्रम, वित्तीय शिक्षा र स्थानीय ग्राहक व्यवस्थापन निरीक्षण गर्दछ।
“मलाई एमएएफले ठूलो चित्र देख्ने तरिका मन पराउँछ, जुन भिन्नता ल्याउन महत्वपूर्ण छ। यो समुदाय र साझेदारहरूसँग काम गर्ने तरीकाले वास्तवमै पहुँचयोग्य र प्रतिकृतिशील छ, ”उनले भनिन्।
"यस कार्यक्रमको दोहोर्याई कसरी एक नाफामुखी लाभ प्रविधिको एक उदाहरण हो र म संस्था बढ्दै देखिरहेको छु।"
मिसन जिल्ला मा काम Ximena खाद्य देखि व्यवसाय र कला को ल्याटिन अमेरिका को मनमोहक सम्झनाहरु दिन्छ। कामको बाहिर, उनी संगीत मन पराउँछिन् र आशा गर्छिन् कि एक दिन आफ्नै गीतहरू रचना गर्नुहोस्। उनी तपाइँलाई भन्नुहुने कुनै पनि गीत काना बजाउनमा साँच्चिकै उत्कृष्ट छिन्! Ximena ओक्ल्यान्ड को सम्पन्न समुदाय र संस्कृति अन्वेषण मा रमाउँदछन्, जहाँ उनी आफ्नो पति संग बस्छिन्।
टीम, Ximena मा स्वागत छ!